China PCB-Assembly mveliso kunye nabenzi | Sichi
(1) imveliso eyiyo:
I-PCB inokuluqonda unxibelelwano lombane phakathi kwezinto ezahlukeneyo kwisekethe, endaweni yeentambo ezintsonkothileyo, ukunciphisa umthwalo wiring ngendlela yesiko, kunye nokwenza lula ukuwelda, ukuhlanganisa kunye nokulungisa iimveliso ze-elektroniki.
(2) Ukuthembeka kunye nokwenza into encinci
Umthamo weemveliso ze-elektroniki uyancitshiswa, iindleko zemveliso zincitshisiwe, kunye nokuthembeka kunye nomgangatho wemveliso yezixhobo ze-elektroniki ziyaphuculwa.
(3) Imigangatho yemveliso:
Inokutshintshiselana okuhle kweeyunithi zeemveliso. Inokwamkela uyilo olusemgangathweni, olulungele ukuwelda ngoomatshini kunye nemveliso ezisebenzelayo, kwaye iphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso.
(4) Ulondolozo olulungileyo kunye nokutshintshiselana:
Izixhobo zezixhobo zineempawu ezintle zoomatshini nezombane, ukuze izixhobo zombane zikwazi ukuvelisa imveliso yelayini, kunye nebhodi yesekethe eprintiweyo emva kwendibano kunye nokulungisa ingxaki inokusetyenziswa njengenxalenye esecaleni, ekulungeleyo ukutshintshiselana nokugcinwa yonke imveliso.
Ngenxa eziluncedo ezine ngentla PCB, PCB iye yasetyenziswa ngokubanzi ekuvelisweni kweemveliso elektroniki. Ngaphandle kwe-PCB, akuyi kubakho kuphuhliswa ngokukhawuleza kolwazi lwangoku lwe-elektroniki. Itekhnoloji yeJingbang izakuqhubeka nokuphucula inkqubo yokuvelisa ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezingcono.
• Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava
• Ngaphezulu kwama-60 abasebenzi beR kunye noD
• I-1100sq.m mveliso yeyona nkampani inkulu kunye neyona nkampani inengcali kweli candelo lase China
• IC crack: ikhowudi umatshini kunye 2 iisampulu chips ziya kubonelelwa uvavanyo
• Ukukhutshelwa kwe-PCB / PCBA: kuya kubonelelwa nge-BOM, i-PCB kunye ne-SCH kwi-Protell 99SE
• I-PCB / i-PCBA clone: ​​ikhowudi yomatshini, i-BOM, i-PCB, i-SCH kunye neebhodi zeesampulu ezi-2 ziya kubonelelwa
• I-PCBA yethu isetyenziswa ngokubanzi: kwizixhobo zonyango
• Izixhobo zolawulo lwemizi-mveliso
• Izicelo zonxibelelwano ngomnxeba:
• Ushishino lwezomkhosi
• Zonke iimveliso ze-elektroniki
• Iyafumaneka ngemigca eli-12 kwaye zonke zinokwenza iimveliso zeRoHS
• Ubungakanani obukhulu be-PCB umatshini wethu we-SMT unokwenza: (L) 457 x (W) 356mm
Ubuncinci besayizi: (L) 50 x (W) 50mm /Ubuncinci ubungakanani be-QFP: 45 x 45mm
Ubuncinci besayizi ye-chip: 0201
• Oomatshini banokwenza i-BGA, i-CSP, i-LLP, kunye nezinye izinto ezikhethekileyo zephakheji
• Umthamo opheleleyo: 10 yezigidi zeetshipsi / ngosuku (iishifti ezimbini)
• Kukho i-10 M / I (i-wave soldering) imigca, emithathu yayo yeemveliso zeRoHS kwaye inokwandiswa ibe yimigca esixhenxe.
• Izinto ze-M / I (ezinje nge-axis resistor, i-capacitor kunye ne-diode) zinokwenziwa ngaphambili ngokuzenzekelayo
• Ubukhulu bePBB banokwenza: (L) 550 x (W) 350mm
Ubuncinci besayizi: (L) 50 x (W) 35mm
• Iyafumaneka ngemigca emithandathu yokudlulisa kwisisombululo seRoHS
• Yonke imigca inokwenza iimveliso ezincinci ezinje ngeMP3, abadlali beMP4, kunye neefowuni eziphathwayo
• Ukunikezelwa kwenkonzo yokujika kwezinto kunye nomzekelo wokuqala
Okulandelayo: Ukufakwa kwePCBB